धेरै मानिसलाई खुसीको कारण र केले त्यो दिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन | Ratopati
सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस
धेरै मानिसलाई खुसीको कारण र केले त्यो दिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन
खुसी अरुले ल्याइदिने होइन, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो खुसी आफै खोज्ने हो ।
personसुनिता न्यौपाने exploreकाठमाडौं access_timeचैत ६, २०७५ chat_bubble_outline0
Photo source: adityasamadhiya.com
विश्व खुसी दिवस (२० मार्च)को अवसरमा वेस्टन सर्च इन्स्टिच्यूट अफ पोजेटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. रामचन्द्र लामिछानेसँग रातोपाटीका सुनिता न्यौपानेले गरेको खुसी संवाद
खुसीलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
नकारात्मकको परिभाषा नै एकदमै अचम्मको छ । खुसी सापेक्षित हुन्छ । नकारात्मक कुराले पनि कहिलेकाहीँ खुसी दिन सक्छ । कुनै अवस्थामा नकारात्मक हुँदा पनि खुसी प्राप्त हुन्छ ।
हामीभित्र दुई प्रकारको दिमाग छ । अर्धचेतन दिमाग र चेतनशील दिमाग । चेतनशील दिमागले प्रत्यक्ष कुराहरु देख्छ । त्यसले सही र गलत छुट्याँउछ । अर्धचेतन दिमागले सही र गलत छुट्याउँदैन । उसको लागि सही र गलत एउटै कुरा हुन्छ । गरिब भनेपछि उसले गरिबको चित्र आफ्नो दिमागमा राख्छ । मान्छेलाई गरिब हुनुका कारण खोज्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
किनभने हामीभित्र दुई प्रकारको दिमाग छ । अर्धचेतन दिमाग र चेतनशील दिमाग । चेतनशील दिमागले प्रत्यक्ष कुराहरु देख्छ । त्यसले सही र गलत छुट्याँउछ । अर्धचेतन दिमागले सही र गलत छुट्याउँदैन । उसको लागि सही र गलत एउटै कुरा हुन्छ । गरिब भनेपछि उसले गरिबको चित्र आफ्नो दिमागमा राख्छ । मान्छेलाई गरिब हुनुका कारण खोज्न अभिप्रेरित गर्दछ । अर्धचेतन दिमागले चेतन दिमागलाई त्यस्तो निर्देशन दिन्छ । त्यसले गर्दा थाहा नपाई आम मानिस गरिबीमा अभ्यस्त भएका हुन्छन् ।समृद्धि के हो भनेर हामीले छलफलमा ल्यायौं भने समृद्धि कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्छाैँ । त्यसकारण मनोविज्ञानका कुराहरु पनि छन् ।
मेरो जिन्दगीदेखि म एकदमै खुसी छु । मैले के सिकेको छु भने प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता देख्न सिकेको छु ।